I-Porn Pandemic - Isisekelo Somvuzo - Uthando, Ubulili ne-Intanethi
Uhlelo olukhethekile ngoMeyi 2021
TRF ku-Press 2021
Ikhaya Ibhulogi yezindaba I-Porn Pandemic
i-adminacount888 I-3rd April 2020 Izindaba zakamuva
I-Big Porn Ifuna Ukuzenzela Imali Kubhubhane
Lokhu okuthunyelwe kwezivakashi ngobhubhane lwe-porn kuqhamuka kuMadeleine Kearns, uWilliam F. Buckley Fellow kwiPolitiki Journalism esikhungweni seNational Review Institute. Umbhalo wokuqala uyabonakala lapha. Into yakhe ehlobene, efushane ibizwa 'Into Yokugcina Yodwa Abantu Abadinga Ukudingwa ” kubuye kufundeke. Emuva ngoFebhuwari 2020 samshicilela imicabango yakhe ku- Inhlekelele Yezempilo ye-Porn.
“Ngesikhathi senhlekelele, imboni yezocansi ibuye yengeze usizi lwabantu.
Kwi-movie ka-1980 Indiza!, isilawuli sethrafikhi yomoya uSteve McCroskey ulwela ukuqondisa indiza enabasebenzi bayo abakhishwe bonke ngoshevu wokudla baya endaweni ephephile. “Kubukeka sengathi ngikhethe isonto elingalungile lokuthi ngiyeke ukubhema,” esho ejuluka kakhulu. Kamuva, uyanezela ukuthi futhi bekuyisonto elingalungile “lokuyeka ama-amphetamine” bese kuthi futhi kube “yisonto elingalungile lokuyeka ukuhogela iglue.”
Emzameni wokumisa izinhlelo zethu zokunakekelwa kwempilo zingabhidliki phakathi komqedazwe womhlaba wonke we-COVID-19, abaningi babambeke bodwa, babhekene nengcindezi yokungasebenzi kanye nokungaqiniseki okungapheli. Ngaleso sikhathi, amadoda amaningi kungenzeka azibuze ukuthi ngabe bakhethe isonto elingalungile yini lokuyeka izithombe zobulili ezingcolile.
NgoMashi 13, i-Pornhub, umhlinzeki omkhulu wezocansi we-Intanethi, yamemezela ukuthi ihlinzeka abasebenzisi e-Italy ngamalungelo okufinyelela mahhala nababhalisile. Kusukela lapho, inkampani yenze okufanayo eFrance naseSpain. Leli sayithi likhuphuke njalo kubabukeli kulo lonke elaseYurophu, eCanada nase-United States.
Ubulungu Bamahhala Bamahhala
Ezinsukwini lapho kwethulwa khona ubulungu bama-premium bamahhala e-Italy, eFrance naseSpain, isiminyaminya ezweni ngalinye sanda ngamaphesenti angama-57, amaphesenti angama-38, namaphesenti angama-61 ngokulandelana. NgoMashi 17, ukuhamba kwayo emhlabeni wonke kwakhuphuke ngamaphesenti angama-26.4. Abaphathi be-Pornhub bamemezele kubhulogi labo ukuthi izibalo "zikhombisa ngokusobala ukuthi abantu kulo lonke elaseYurophu babejabule ngokuba neziphazamiso ngenkathi bevalelwa bodwa ekhaya."
Kepha esithangamini seReddit esinamalungu angaphezu kwesigamu sesigidi salabo abalulama ekubeni umlutha wezithombe zocansi, abanye baxoxa indaba ehlukile:
“Le corona s *** iyangibulala. Hhayi igciwane kepha ukwahlukaniswa. Ngangiya ejimini nsuku zonke futhi ngangisebenza kakhulu empilweni yami yokuzijabulisa kodwa manje anginandawo engingaya kuyo futhi akukho engingakwenza. Ngabuyela emuva emuva kwezinsuku ezingama-24. ”
“NgiseSpain ngakho izifundo zami zaseyunivesithi ziyamiswa kanti nomsebenzi wami wesikhashana sengikude ngenxa ye-coronavirus. Ngingaphuma ekhaya kodwa akunconywa. Manje njengoba ngisekhaya usuku lonke, ukubuyela emuva sekulula kakhulu. Namuhla ngibuyele emuva izikhathi ze-3, lapho emasontweni ajwayelekile evamile ngangivame ukubuyela emuva izikhathi ze-1 noma ze-2. Ngidinga usizo, lokhu kuzoba kubi kakhulu uma ngingakuyeki manje. ”
"Ngivele ngabuyela ezikhathini ezi-9 kule nyanga."
“Kancane kancane kwehla kuya kumsangano lapho kuvalwa khona. Akukasile ngokwanele ukuthi ungabheka izithombe ezingcolile. Kodwa sizobona. ”
Ngenxa yokuthi kunezifundo ezingaphezu kwe-75 ezixhumanisa ukusetshenziswa kocansi nemiphumela empofu yempilo yengqondo nezinye izifundo ze-45 ze-neuroscience eziphakamisa ukuthi i-porn iyalutha, akumangazi ukuthi akuwona wonke umuntu othola isilingo esandayo sokubuka i-porn njengesiphazamiso esamukelekayo. Ngokusobala, kwenza abanye bazizwe Okuningi ukuphelelwa yithemba.
Iseluleko esihle esivela kwaNoFap
Kungakho abahleli besithangami seReddit, nabo abasebenza iwebhusayithi babizwa I-NoFap, ubhale i-blog yezeluleko kulabo abazama ukugwema i-porn ngenkathi behlala ngokuhlukaniswa. Bancoma ukuzindla, ukuzivocavoca umzimba, ukuxhumana nokuxhumana nabanye cishe, nokunciphisa ukusetshenziswa komuntu kwe-inthanethi kwansuku zonke. Ukukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kocansi okungalimaza kungaba kanjani, omunye wabasebenzisi besithangami seNoFap uthumele i-meme ekhombisa umfula ojulile obhalwe ukuthi "ukunxusa," ulenga phezu komphakathi owakhiwe obhalwe ukuthi "amandla ami aphelele," ovinjelwe ukuthi ungagcwala udonga kubhalwe ukuthi “ukuzithiba.”
Akubona nje abasebenzisi ukuthi amasayithi we-porn afuna ukusizakala ngalesi sikhathi esinzima. Ngokusho kwe- Oshaya ucingo nsuku zonke: "Iwebhusayithi yezithombe zocansi [i-IsMyGirl] ihlose abasebenzi bakaMcDonald ababhekene nemali ephansi ngesikhathi sobhadane lwe-coronavirus ngokubanika ithuba lokuhola ngaphezulu kwama- $ 100,000 ngonyaka ukuze babambe iqhaza kwezocansi." Umsunguli wesayithi, u-Evan Seinfeld, kusho ekukhululweni kwezindaba ethunyelwe kubasebenzi bakaMcDonald abangaphezu kwesigamu sesigidi: “Emzameni wokusiza abasebenzi bakaMcDonald, nokuqinisekisa ukuthi bangaqhubeka nokuzondla bona nemindeni yabo, sifuna ukusiza ukubanikeza ithuba elisemthethweni.”
Kepha ngabe lokhu kuqondiswa kwamantombazane ahola kancane aphansi ngenhlanhla yawo kusemthethweni ngempela? Isikhathi nesikhathi, abenzi bezithombe ezingcolile bakhombisile ukungabi nandaba kwabo nokuphoqwa, ukuhlukunyezwa nokuphangwa ngaphakathi embonini. Amavidiyo okudlwengulwa kanye Amantombazane asemancane ajwayele ukuvimbela izingosi ze-porn. Ngisho nangemva kokuba okuqukethwe okungeyona imvumelwano kutholakele, kunjalo hhayi njalo ukwehliswa.
Imboni yezocansi ingalisebenzisa ithuba lobhadane lomhlaba wonke. Kodwa ngesikhathi sokukhishwa inyumbazane, isithukuthezi nokwesaba, kumane nje kungeze usizi olwengeziwe. ”
Ukufaka isicelo Shut Down Pornhub
I-Change.org njengamanje ibamba isicelo sokuvala i-Pornhub. Ihlose ukubamba abaphathi bayo ukuthi baziphendulele ekusizeni ukushushumbiswa kwamantombazane angenasici. Sayina isicelo futhi ujoyine abantu abayi-560,000 emhlabeni jikelele ngokuthi 'ima manje'. Ukuziphatha kuka-Pornhub njengenhlangano kungaphansi kwalokho kwamukelekile ku-2020.
© 2021 UMHLABA WOKUPHUMA: ZONKE AMALUNGELO AHLELEKILEYO
IReward Foundation, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL: IScottish Charitable Incorporate Organisation SC044948